"Anigoo Jijin isticmaalaya ayaan carruur badan noloshooda badbaadiyay" - BBC News Somali
Image caption Barnaamijkan ayaa hoos u dhigay dhimashada hooyada iyo dhallaanka
Qaar ka mid ah bulshooyinka ku nool miyiga Kenya, haweenkooda iyagoo uur leh ayey xoolaha raacaan, meelo fog-fog ayeyna u daaq geeyaan, taasoo ay micnaheeda tahay inaysan xilli walba heli karin adeeg caafimaad ama isbitaal wakhtiga ay foosha qabato.
Dahabo Cabdi, waxay ka shaqeysaa qeybta farsamada ee sheybaarka isbitaalka magaalada Mooyaale, waxayna la timid fikrad aad cajiib u ah.
Waxay sameysay jijin leh aaladda wax hagta ee lagu magacaabo GPS, iyadoo ulajeeddadeedu ay tahay inay gacan ka geysato badbaadinta hooyada iyo dhallaanka, xilliga dhalmada.
Hooyada gacanta loogu xiro jijintan waxay dhakhaatiirta umulintu kasoo raadin karaan meel kasta oo ay foosha ku qabato, iyagoo kusoo raacaya aaladda goobaha tilmaanta ee gacanteeda ku xiran.
Dhallaan 5 bilood loo haystay markii hooyadii ay bixin wayday lacagtii dhalmada
Image caption Hooyooyin badan ayey foosha qabataa iyagoo xoolo la jooga meelo fog-fog
Dahabo ayaa sheegtay in dhibaatada ay hadda la dagaallameyso ay horayba ugu soo dhacday iyada qudheeda.
"Aniga lafteyda ayey labo jeer ilmo uurkeyga ku jiray iga soo dilmeen, marka hooyo ahaan waan aqaannaa xanuunka ay leedahay in cunugaagii uu dhinto isagoo caloosha ku jira ama aan wali dhalanin, waana taas sababta igu kalliftay inaan raadiyo hab lagu caawiyo hooyooyinka miyiga".
Bulshada Booranta ee ku dhaqan Kenya waa reer guuraa, mar walbana meel hor leh ayey tagaan.
Balse qalabkan ayaa dhakhaatiirta u sahlaya inay lugahooda ugu tagaan hooyooyinka foolanaya ee adeega caafimaad u baahan.
"Marka hore Kumbuyuutarka ayaan ku hubinnaa halka ay joogto hooyada foolaneysa, kaddibna si toos ah ayaan u aadnaa goobta, ilaa 10 xaafadood ayaan adeeggan gaarsiinnay hadda", ayey tiri Dahabo.
Image caption Dahabo waxay dooneysaa in hooyada iyo dhallaanka ay badbaadaan
Laakiin si fudud laguma aqbalin fikraddan, sida ay sharraxeyso Dahabo.
"Markii aan dhameystiray ra'yiga sameynta GPS-ka, waxaan damacnay inaan siinno dumarka, balse way ku gacan seyreen inay aqbalaan. Way diideen sababtoo ah waxay leeyihiin arrimo la xiriira dhaqanka, mana iska oggolaan karaan wax aan waafqsaneyn dhaqankooda, sidaas darteed waxaan la imaannay qorshe kale, qorshahaasna wuxuu ahaa inaan qalabka ku xirno nooc ka mid ah jijimaha ay haweenka xirtaan, wayna ku faraxsanaayeen inay gacanta ku xirtaan".
Markii ugu horreysay ee qorshahan la hirgaliyay waxay ahayd bishii Febraayo ee sanadkii 2018-kii, si xowli ah ayuuna ku socdaa waxtarkiisu.
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayey tiri: "Mid ka mid ah dhammaan haweenka aan arrintan ku caawinnay ayaa i farxad galisa mar walba oo aan arko. guriga ayey ku umushay dhiig badan ayaana ka baxay, waa nala soo wacay isla markiina waxaan geynay isbitaalka, kaddib dhiig ayaan ku shubnay wayna badbaadday. Markii aan cunugeeda siinnay xoogaa ka dib, aad bay ugu faraxday sababtoo ah waxay u maleyneysay inay dhiman doonto".
Barnaamijkan muhiimka ah ayaa ilaa iyo hadda lagu caawiyay in ka badan 268 haween ah, waxaana hoos u dhacday tirada dhimashada carruurta iyo hooyooyinka ee xilliga foosha.